सत्तापक्षकै सांसदद्धारा बजेट पुस्तक सरकारलार्इ फिर्ता – MeroJilla.com
सत्तापक्षकै सांसदद्धारा बजेट पुस्तक सरकारलार्इ फिर्ता
सरकारका मन्त्रीहरुले बजेट विनियोजन गर्दा विवेक गुमाएर संविधान विपरित आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र र वडामा मात्रै केन्द्रित विकास कार्यक्रम गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारद्धारा वितरित विनियोजन विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीलाई फर्र्काएका छन्।
सम्भवत् नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पल्ट सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको विकास कार्यक्रमप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै मन्त्रीहरुमाथि आक्रोस पोखिएको यो पहिलो उदाहरण हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद झपटबहादुर रावलले सरकारका मन्त्रीहरुलाई कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशका जनताको श्राप लाग्ने बताए।
मन्त्रीहरुले तय गरेको कार्यक्रममाथि तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सभामुखमार्फत तीन वटै मन्त्रालयको बजेट कार्यक्रमको पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई फिर्ता गरेको घोषणा गरे।
रावलसँगै यसअघि बोल्ने नेकपाकै सांसदद्धय प्रमेबहादुर आले र गजेन्द्रबहादुर महतले व्यक्त गरेको आलोचनाले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको अभिव्यक्ति समेत फिका देखिएको थियो।
संसदमा बोल्दै रावलले के भन्न बाँकी राखे सरकार र सरकारका मन्त्रीको विषयमा? प्रस्तुत छ रावलले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंशः
‘नभनु रमरमी रमे, भनेर खोई हुने। (खोई भनेको बेइज्जत हुने।) मै मन्त्री छु मेरै हात, मै मात्रै सहि हुने। धन्यवाद छ मन्त्रीहरुलाई। आज तपाईहरुले अगाडि सार्नु भएको विकास कार्यक्रमका लागि। म अहिले उमेरले ४४ वर्षमा प्रवेश गर्दै छु। मैले खाली आँखाले हेरेँ तपाइहरुले पेश गरेका कार्यक्रमहरुमा कतै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम परेको छ कि भनेर। खाली आँखाले नदेखेपछि फेरि त्रिपुरेश्वर गएर चश्मा लिएर आएँ। त्यो चश्मा लगाएर हेर्दा पनि केहि देखिन। यस अर्थमा फेरिपनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईहरुको सद्बुद्धि आयोस त भन्दिन तर, कामना गर्न सक्छु, सद्बुद्धि आओस्।
हामी नेपालको संविधानभन्दा कोहि पनि माथि हुन सक्दैनौँ। नेपालको संविधानमा जुन प्रावधान छ र त्यसले निर्दिष्ठ गरेको व्यवस्था त्यो भन्दा बाहिर गएर हामी कसैले पनि कुनै गतिविधि गर्न सक्दैनौँ।
त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएका केहि विषयवस्तु उल्लेख गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा ३ ले सबै भूगोल, क्षेत्र समुदायका जनतालाई समष्टीमा राष्ट्र हो भनेर परिभाषित गरेको छ। संविधानको परिधिभित्र रहेर सरकारले प्रस्तुत गरको बजेटलाई हेर्दा बजेटले संविधानको प्रावधानलाई आत्मसाथ गरेको देखिएन। संविधानले नेता विशेष र मन्त्रीविशेषको निगाहमा बजेट विनियोजन गर्ने कल्पना गरेको छैन।
बजेट विनियोजन गर्दा कम्तिमा राष्ट्रको परिभाषा एक पटक हेरिएको भए बजेटमा आलोचना गर्ने ठाउँ हुने थिएन होला। समग्रमा यो बजेट नेता र मन्त्री विशेषले आफ्नो नाकको टुप्पो, अझै भन्दा यी तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीको नाक लामो लामै छ, त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो नाकको टुप्पो बाहेक अन्त देख्नु भएन भन्ने मेरो निश्कर्ष छ। त्यो भन्दा टाढा देख्न सकेको भए संविधानले १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्य निर्वाचित गरेको छ। हामीले विकासमा संविधानको व्यवस्था अनुरुप हिस्सेदारी खोजेका छौँ न कि तपाइहरुको निगाह र बक्स खोजेका हौँ। यो हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। तपाइहरुको दया, माया र भिख मागेको होइन। त्यसैले जनताको जनादेश हो यो। यति प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित बजेट विनियोजन गरिनु संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्था विपरितको कदम हो भन्ने कुरा जोडदार ढंगले यो गरिमामय सदनमा उठाउन चाहन्छु।
बजेट छुट्याउदा कम्तिमा आफ्नो नाकको टुप्पो भन्दा पर वा अलि टाढा पनि नेपाल र नेपाली जनता बस्छन् भन्ने कुराको हेक्का राखेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मैले तीनवटै मन्त्रालयको कार्यक्रम पढेँ, हेरेँ, दश चोटी पल्टाए तर, मैले केहि पनि देखिन। हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा अगाडि सारेका छौँ। तर, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि हामीसँग त्यो आधार निर्माण गर्नका लागि अझै भन्नु पर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था भनेको जहाँ न्याय र समानतामा आधारित राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई सम्मानीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाइहरुले अगाडि सार्नु भएका यी तीनवटै मन्त्रालयको कार्यक्रमले के समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्छ? के समानतामा आधारित सन्तुलित विकासको कार्यक्रम सार्नु भएको छ? म सोध्न चाहन्छु, डेउडा भाषामा एउटा भनाइ छ, यति हो सेरीको रोपाई, यति हो भात खुवाइ, यति हो पिरती लवाइ, यति हो साथ अराई। कि तपाईहरुको यति नै हो म सोध्न चाहन्छु। मैले हेरेँ, म तपाइहरुको विषयमा धेरै भन्न र समय बर्वाद गर्न चाहन्न।
मैले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, खेलकूदका कार्यक्रम खेस्रा खेस्रा गरेर पढेँ। अर्थमन्त्रालयको त कुरै नगरौँ। यो भन्दा कम्तिमा तपाईहरुले म नेपालको मन्त्री हुँ भन्ने हेक्का राख्नु भएन। तपाईहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र आफ्नो टोल र वडाभन्दा बाहिर गएको देखिदैन।
समग्रतामा म ७ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु। एकदेखि ७ नम्बर प्रदेशसम्मको बजेट विनियोजन हेरेको छु। यसमा मेले देखिरहेको छु, कि खेलकूद मन्त्रीको जिल्ला र क्षेत्रमा ६५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नु भएको छ। तर, ७ नम्बर प्रदेशमा जम्मा २ करोड ५ लाख रुपैयमा विनियोजन गर्नु भएको छ। त्यहाँका जनताहरुको तपाईलाई श्राप लाग्दैन? त्यहाँका जनताले तपाइहरुलाई धिक्कादैनन्? त्यहाँका जनताको तपाइहरुलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन? तपाइहरुले कुन आँटका साथ कुन हिम्मतकासाथ यो तहको अन्याय गर्नु भयो? यो तपाइहरुको अन्याय भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो भन्दा अर्को टर्मिनोलोजी मैले प्रयोग गर्न सक्दिन।
त्यसैगरी पर्यटनमन्त्री, पछाडि परेको ठाउँ कर्णाली हो। तर, म हेरिरहेको छु, ४ नम्बर प्रदेशभित्र पनि थुप्रै माननीयहरुका क्षेत्रमा कार्यक्रम देखिन। तर, जहाँ पर्यटन मन्त्रीज्यू हुनुहन्छ र राज्यमन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरुको ठाउँमा मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। ४ नम्बर प्रदेशमा ८ सय २७ करोड ८३ लाख विनियोजन भएको छ। जबकि मेरो ७ नम्बर प्रदेशमा जम्मा २ करोड ३५ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ। तपाईहरुलाई यसो गर्दा अलिकति पनि दया लागेन? तपाईको अलिकति पनि विवेकले काम गरेन? म सोध्न चाहन्छु।
त्यसैगरी राज्यमन्त्री ज्यू, तपाइलाई हार्दिक बधाई छ। तपाई नवजवान हुनुहन्छ। मैले सोचिरहेको थिएँ तपाईले दुःखीका कुरा दुःखीले बुझ्दछ, अन्यायमा परेका मानिसका कुरा अन्यायमा परेकै मानिसले मात्रै बुझ्दछ भन्ने बुझेको थिएँ।, तर, तपाई चुनावको बेलामा मात्रै डोल्पामा जानु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको यो अन्यायपूर्ण बजेट विनियोजन गरेकोबाट देखिन्छ। एउटै कर्णालीमा ५७ वटा कार्यक्रम गर्नु भयो र डोल्पामा मात्रै ४४ वटा कार्यक्रम राख्दा अप्ठ्यारो लागेन?
यसैगरी खेलकूद मन्त्री र अन्य मन्त्रीज्यूहरुलाई सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नु भएको बजेट विनियोजनका यी किताब छन् त्यी बाहिर हस्ताक्षर गरेर बुझेको थिएँ। म धेरै कुरा गर्नु भन्दा पनि मैले मेरो क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि सिग्नेचर गरेर बुझेको थिएँ। यो मिल्छ मिल्दैन, सम्माननीय सभामुख मार्फत म उहाँहरु तीनैजना सम्बन्धीत मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुमति चाहन्छु।